Dowladda Soomaaliya oo xaqiijisay in Saraakiil Mareykanka ku sugan yihiin Soomaaliya | Sagal Radio Services
Sii hayaha xilka Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka la socoto saraakiisha Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya.
"Waxay howl galeen ama ay yimaadeen Saraakiishaas Mareykanka bishii October ee sanadkii hore, waxay u yimaadeen inay kala taliyaan qorshaha dagaalka iyo howl galada ka dhanka ah argagixisada ciidamada xooga dalka iyo AMISOM, oo ay ka caawinayaan talooyinka xaga ammaanka"ayuu yiri C/xakiin Fiqi.
C/xakiin Fiqi ayaa sheegay in saraakiishan ay gaarayaan ilaa shan sarkaal, isagoo xusay inay soo dhoweynayaan in dowladda Mareykanka ay Soomaaliya ka caawiso arrimaha ammaanka.
"Saraakiishaas waxay gaarayaan shan sarkaal ama shan askari, runtii waa wax aan soo dhoweyneyno, Mareykanka ciidamo uu u soo diro Soomaaliya waxaa ugu dambeysay 1993, sida la socotaan aqoonsiga dowladda Soomaaliya bishii Janaayo ee sanadkii 2013 wuxuu horseeday in Mareykanka uu xiriir dhow la yeesho Soomaaliya oo uu taageero buuxa siiyo"ayuu yiri Sii hayaha xilka Wasiirka Gaashaandhiga.
Saraakiil ka tirsan Taliska qeybta Afrika ee Mareykanka ayaa maalmo ka hor xaqiijiyay inay jiraan tiro saraakiil ah oo kaga sugan Soomaaliya, kuwaasoo taageeraya ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida.
Xarakada Al-Shabaab oo dhowaan ka hadlay sheegashada Mareykanka in ciidamo tiro yar ka joogaan Soomaaliya ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan, oo ay awalba ay dagaal kula jireen hadii uu xataa ciidankiisa soo geliyay dhulka Soomaaliya.